Ogaden News Agency (ONA) – Shirwaynaha Midaynta Wadamada Islaamka oo Tehran Ka Furmay.
Shirwaynaha Midaynta Wadamada Islaamka oo Tehran Ka Furmay.
Posted by Dayr	/ December 28, 2015
Waxaa caasimada Iran ee Tehran ka furmay shirwaynaha midaynta dalalka Islaamka oo lagu soo beegay Todobaadka xuska dhalashada Nebi Maxamed SCW. Furitaankii shirkaasi ayuu khudbad kasoo jeediyey Madaxweynaha Iran.
Xassan Rowxaani Madaxweynaha Iran ayaa khudbadiisii furitaanka ku weeraray Maamulka Isra’iil oo uu ku eedeeyey inuu yahay kan ka danbeeya dalalka lagu wiiqinayo Islaamka.
“…Dagaalka kasocda Siiriya waa mid dani ugu jirto Isra’iil, iswaydiiya burburinta Suuriya miyay dani ugu jirtaa wadamada Islaamka ah ee jaarka la ah Suuriya? Miyey dani ugu jirtaa Sucuudiga, Turkiga, Jordan iyo Imaaraadka?….” ayuu yidhi Xassan Rowxaani oo ku eedeeyey dalalka Islaamka ineeysan wakhti badan gelin mideynta codkooda.
Rowxaani ayaa sidoo kale ku eedeeyeey in dalalka dhaqaalaha haysta ee Islaamka ay lacag badan ku bixiyaan hubka uu soo saaro Maraykanka taasoo xoojisa dhaqaalaha Maraykanka iyo Isra’iil.
Hogaamiyaha Iran ayaa sheegay in loo baahanyahay in si wadajir ah looga hortago kooxaha Xagjirka ah oo magaca Islaamka sida khaldan u isticmaala kuwaasoo gaysta weerarada argagaxiso, arrintaasi oo uu sheegay inay sumcad xumo ku keentay muslimiinta caalamka oo idil.